Ulapha: ikhaya » Incwadana yoQeqeshiso lweziFundo zoLwazi
Ngale ncwadana unokwaziswa ngezifundo ezibonelelwa eBologna ngoQeqeshoCognitivo. Emva kokugcwalisa le fomu ingezantsi, uya kufumana i-imeyile yokuluhlu. Xa sivula ikhosi entsha, uya kufumana i-imeyile ngenkqubo yobhaliso. Le kuphela kwendlela yokubhalisa kwiikhosi eziqhutywa yiTechnoCognitivo.
Wuyeke lo mhlaba ungenanto ukuba ungumntu: